Le Chant des Sirènes | Entprima Umculo nokuningi
Captain Entprima - Ukukhululwa Amanothi, Khipha Amanothi
Kwangathi 3, 2021
Ingoma iphefumulelwe izinganekwane zamaGrikhi, lapho amatilosi ayengelwa khona ekufeni ngengoma ekhohlisayo yezinhlabamkhosi.
Captain Entprima Ikhaya
Uhlu lokudlalayo lweSpotify - iSerenity Yomhlaba Wonke
Shaja kabusha amabhethri akho ukuguqula umhlaba ube yiplanethi enokuthula. Ingxenye ephelele Entprima umculo mqondo.
Uyisakhamuzi esibucayi seplanethi yethu futhi ukhathazekile ngekusasa? Kunezizathu ezanele zalokhu kukhathazeka. The Entprima Jazz Cosmonauts cula iculo noma amabili ngakho.
Kepha ukukhathazeka okungapheli kuholela ekuxinekeni kwemizwelo futhi kukuphuca amandla okumelana nayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukubuyisa umphefumulo esele.
Akukhona ukukhaphela impi yokulwela izwe elinokuthula uma uthola ukuthula kwangaphakathi, yize izinto ezimbi zivame ukubusa umhlaba. Amaphimbo anamandla aphikelelayo kuphela azokwazi ukuguqula izinto ngokuhamba kwesikhathi.
Asingcwabeli amakhanda ethu esihlabathini, kepha sifuna ukukunika umculo oholela ekulinganisweni komphefumulo.
Ukugqugquzelwa kwale ngoma kwavela ezidalweni ezinganekwane ezivela ezinganekwaneni zamaGrikhi, ezisekhaya esiqhingini futhi ziyenga amatilosi ngezingoma ezikhohlisayo, kuphela ukuzibulala. Kuzwakala imiculo emibili ehlukene, ilandelwa yimashi yomngcwabo yamatilosi abulewe. Ekugcineni, i-knell izwakala.
Isiqalo sokucabanga kwakuwumbuzo olula wokuthi izingoma ezinhle, ezikhohlisayo zakhiwa kanjani empeleni. Kusukela Captain EntprimaUhlelo lungumculo ophumuzayo, indawo yomsindo nayo ibambe iqhaza elibalulekile. Vele, izidalwa zasenganekwaneni zisebenzisa zonke izindlela ezikhona ukufeza inhloso yazo. Imisindo ye-elekthronikhi ibingaba yingcebo yangempela yama-siren anamuhla, futhi phela, Captain Entprima futhi luhlobo lwesidalwa esasenganekwaneni.
Ngenkathi izinhlabamkhosi ezinganekwaneni zibukeka njengezilo ezinkulu, sizilinganisele esimeni sokulangazelela uthando, ngakho-ke izinhlabamkhosi zethu zihle kakhulu.
Umoya Ukuhlanza Umoya
Yizwa uzwe umoya ohlanza umphefumulo. Kuhlanganiswe nemisindo yomculo efudumeza inhliziyo.
Zizwe umlingo womhume omuhle ngomsindo wokudonsa kwamanzi nemisindo yemilingo.